Nepal Dayari | सुन्दा नि अचम्म : खाली पेटमा चटपटे खाँदाको परिणाम !! ९ बर्षा केटीको जिन्दगी बर्बाद भयो (हेर्नुहोस् भिडियो)
सुन्दा नि अचम्म : खाली पेटमा चटपटे खाँदाको परिणाम !! ९ बर्षा केटीको जिन्दगी बर्बाद भयो (हेर्नुहोस् भिडियो)
फागुण २८, २०७८ शनिबार २२५ पटक हेरिएको
सुन्दा नि अचम्म: खाली पेटमा चटपटे खाँदाको परिणाम !! ९ बर्षा केटीको जिन्दगी बर्बाद भयो (हेर्नुहोस् भिडियो)
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, खाली पेटमा चटपटे खाँदाको परिणाम मृगौला फेल भएको छ । नाम रहेको छ घिसिङ अञ्जली उहाको मृगौला खराब भएको त्यो पनि खाली पेटमा चटपटे खाएर।
प्राय खाली पेटमा चटपटे खाई रहने गरेको र पछिल्लो समयमा खाई रहदा यस्तो समस्या आएको सुनाउँछन्। सबैले मलाई साथी फेसबुक मा बन्न अपनी आग्रह गर्छिन्।अहिले पछिल्लो समय यो रोग लागि सकेपछि धेरै कुरा सोच्ने गरेको साथै खाना पनि नखाएको ले गर्दा धेरै नै दुब्लो देखिएकी छिन्।
अहिले यस्तो भै सकेपछि कोही पनि साथी नभएको र साथी बन्न आग्रह गर्छिन्।भाइरल भएको नया राम्रो ठाउँ घुम्न जाने इच्छा रहेको उनी सुनाउँछिन्। बा निको हुँदैन कि भनेर जहिले पनि दुःख व्यक्त गर्छिन्।